Sajhasabal.com |दसैं भनेर जथाभावी नखानुस्, फूड पोइजनिङ होला ! यस्तो छ घरेलु उपचार बिधि
दसैं भनेर जथाभावी नखानुस्, फूड पोइजनिङ होला ! यस्तो छ घरेलु उपचार बिधि
असोज २८, काठमाडौँ | दसैं त हो नी भनेर जथाभावी खाँदा र आवश्यक भन्दा बढी खाँदा यो बेला धेरै मानिस बिरामी पर्छन । अझ कतिपयले त यो दसैंमा खाने हो भनेर महिनौंदेखि खानेकुरा जोहो गरेर राखेका हुन्छ । यस्ता खानेकुराबाट फूड पोइजनिङको जोखिम उच्च हुने गरेको छ ।
- अदुवा चियामा थोरै मह मिसाएर दिनमा कम्तीमा तीनपटक पिउँदा फुड पोइजनिङबाट आराम मिल्छ।
- नरिवल पानी सेवन गर्दा औषधिको काम गर्छ ।
- तुलसीको पातलाई उमालेर मह मिसाएर पिउँदा राहत मिल्छ।
- एक टुक्रा लसुन पानीमा राखेर पिउँदा ब्याक्टेरियल संक्रमणबाट मुक्ति पाउन सकिन्छ।
- एक चम्चा जीरा पिसेर खानामा प्रयोग गरेमा फूड प्वाइजनबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ।
- फूड प्वाइजनमा स्याउ र केराको सेवन एकदमै लाभदायक मानिन्छ।
- यस्तो बेला पानीको सेवन बढी मात्रामा गर्दा फाइदाजनक हुन्छ।